दिवसमा थपिएको विधिशास्त्र
असोज ३, संविधान दिवस। असार १५ को धान दिवसमा नभए पनि संविधान दिवसमा भने सरकारले सार्वजनिक विदा दिँदै आएको छ। विगतका वर्षभन्दा यसपटकको संविधान दिवस विशेष हुने भएको छ। विगतमा
भिडियो वार्ता अन्यत्रचाहिँ ?
पीएम ओली उपचारका सिलसिलामा सिंगापुर पुग्या छन्। त्यता जानुअघि उनले कम्रेड पोखरेललाई कार्यवाहक जिम्मेवारी तोके। अर्थात् आफ्नो अनुपस्थितिमा पोखरेलको हस्ताक्षर काफी छ, मपछिका सरकारका भान्छे उनै हुन् भन्दै ओली सिंगापुर
गत साता नेकपा सचिवालय बैठकमा पीएम ओली र अर्का नेता नेपाल वीचको घम्साघम्सी छताछुल्ल भएसी सो दलले अब फरक नीति लिएको छ। बैठकमा भएका कुरा हुबहु बाहिर सार्वजनिक नगर्ने, गाली
‘लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो’ यो उखान नसुन्ने नेपाली बिरलै होलान्। अहिलेको फेसबुके पुस्ताले झट्ट सुन्दा उखानको चुरो कुरो थाहा पाउँदैन, बुझ्दैन। तर तिनका बा–आमाले घरमैं पटक–पटक प्रयोगात्मक अभ्यास दोहोत्याउने
पीएम ओली पुनः स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिंगापुर उड्याछन्। आफू विदेश उड्नुअघिको सचिवालय बैठकमा अन्य एजेन्डालाई सोझै पाखा लगाएर ओलीले शुभयात्रा, शुभकामना, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न आग्रह गरे। ‘बैठकले मलाई
एका बिहानै बीच बजारमा एउटा आवाज सुनियो, ‘भटटट, भटटट, भटटट’ हैन, यो केको आवाज हँ ? खै ? आवाज त बाइकको जस्तो पो छ त है ? तल्लो बजारमा बाइक
हाम्रा मन्त्री, नेताहरूको दाबी पत्याउने हो भने नेपाल युरोप र युरोप नेपाल हुनुपर्ने तर के गर्नु गफले मात्र मुलुक बन्दैन। बन्ने छार्टकार्ट पनि छैन। बरु तर्क र दाबीको सगरमाथा, कञ्चनजंगा
अहिले चर्चाको चुलीमा रवि र छवी छन्। रवि अर्थात् टेलिभिजन रवि लामिछाने, छवी अर्थात् चलचित्र क्षेत्रका हस्ती छवी ओझा। चर्चामा रहेका छवीलाई रविले ओझेलमा पार्या छन्। एकले अर्कालाई ओझेलमा पारे
भनाइ नै छ– ‘व्यक्ति आफूले गल्ती गर्या छ भने आफ्नै छायाँदेखि पनि तर्सिन्छ। कसैले पछ्याइरहेछ, लखेटी रहेछ भन्दै दौडिन्छ। केले पछ्याएको हो, केले लखेट्या हो, छुट्याउन भ्याउँदैन अनि भागिरहन्छ, त्यो
अमेरिका पुगेर उतै लुकीछिपी बस्न मरिहत्ते गर्नेलाई अमेरिकाले अब पापा (ग्रिन कार्ड) होइन लोप्पा ख्वाउने भएको छ। अमेरिका बसाइ लम्ब्याउन खोज्न चाहने चाहे ती बाउको साइनोको हुन्, आमाको, मामाको वा
पीएम ओलीलाई जति बुझ्यो उति बुझ्न गाह्रो । सँधै विदेशबाट फर्किदा विमानस्थलमा सञ्चारमाध्यमलाई ब्रिफिङ गर्ने, पत्रकारका प्रश्नलाई कुटनीतिक शैलीका जवाफ फर्काउन माहिर ओली यसपटक फरक देखिए । पत्रकारसँग बोल्न चाहेनन्
रक्सी स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हो, रक्सीले करोडपतीलाई पनि रोडपति बनाउँछ भन्ने कुरो जो कोहीलाई थाहा भएकै हो । ढुकुरका जोडी जस्ता दम्पत्तिलाई विछोड गराउने, घरेलु हिंसा र अपराधका घटना बढाउने
हिजो–आज तरकारीको मूल्य यति धेरै बढ्या बढ्यै छ कि बढेको मूल्यले सरकार सोझै ओझेलमा प¥या छ । मूल्यवृद्धिले कहिले काहिँ त सरकार कहाँ छ भन्ने सुईँको समेत पाइन्न । सरकारले
तीज सफल बनाउने विकल्प
तीज भन्ने वित्तिकै जो कोहीको मानसपटलमा हिन्दुनारीको तस्वीर झलझली झल्किन्छ । रातो बस्त्र, चुरा पोते र ढकमक्क गर गहनासहितको नाचगान विर्सने कुरै भएन । तीजको मुख्य दिनभन्दा निकै साताअघिदेखि पार्टी
पहिरनका पसलहरुमा ‘बोल बम’ का जर्सी लगाएका र नागधारी शिवजी बनेका ‘म्यानक्वीन’ देखेर धरहरा दंग छ । मूर्तिजस्ता देखिने विज्ञापन सामग्री पनि आफ्ना भक्त भएकोमा शिवजी पनि दंग भएको हुनुपर्छ
अन्य श्री ३ कहिले चिन्ने ?
उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र विद्युत प्राधिकरणका सीइओ कुलमान घिसिङ बहुसंख्यक नेपालीले सुन्या चिन्या नाम हो । घिसिङले प्राधिकरण हाक्न थालेसी लोडसेडिङ दुर भएको, शहरी क्षेत्रमा इन्र्भटर र जेनेरेटरको विजनेस झुर
नाम मे कि राखल छै ?
धरहरालाई हिजो सोमबार मैथिल भाषा बोलौं–बोलौं लागेर आयो । भाषा मीठो, नरम र लयात्मक भएका कारण धरधरा प्रदेश नम्बर २ तिर पुगेका बेलामा मात्र होइन, काठमाडौंमै पनि मैथिलभाषी साथीहरु फेला
यो ‘सर’ यता उता सर होइन, सम्मानवाचन शब्द ‘सर’ अर्थात अंग्रेजीको एसआइआर हो । गएको बिहीबार सर्वोच्च अदालतको आँगनमा पनि यही शब्द बोलियो– पत्रकार सर । धरहरा देख्दै पुरुष, छाम्दै
नारा कसलाई ?
‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम इतिहासकै सफल, एक महिनाको अवधिमा एक लाख ७० हजार भन्दा बढीले बेरोजगारले रोजगार पाएकाले यो इतिहासकै सफल कार्यक्रम बन्या छ’–श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट । यसैवर्ष पाँच लाख
कलियुगमा आरती उतार्दा..
पर्यटनमन्त्री बन्न शितलनिवास, बालुवाटार, खुमलटार लगायत अन्य धेरै टारका नेकपा मठमन्दिर धाउनेहरु बुधवार दिउँसो झसङ्गै र खङ्ग्रङ्गै भए । दिनहुँजसो यस्ता शक्तिपिठ धाएर मन्दिरका मुख्य पुजारीले चाहे अनुसार आरती उतार्दा